.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: SWiSH Max2 Portable [ New Version ]
SWiSH Max2 Portable [ New Version ]
ကျွန်တော် ဟိုအရင်နေ့ကပဲ SWiSH Max2 Full & Final ဆိုတာလေးကို ဒီနေရာလေးမှာ တင်ပေးထားပြီးသားပါ။
အဲဒါက Patch ဖိုင် ထည့်မှ Full Version ဖြစ်တာဆိုတော့ လူတိုင်း သိပ်မလုပ်တတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
လုပ်နည်းကိုတော့ အပြည့်အစုံ သေချာရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် SWiSH Max2 ကို Portable လေးဆိုရင်
အားလုံးအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ တန်းသုံးလို့ရတယ်လေ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်
အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ် ။ Portable ဖြစ်အောင်ကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးထားတာပါ။
Download: SWiSH Max2 Portable [ New Version ]
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ Flash Song လေးတွေလုပ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်လေးကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
Posted by Thurainlin at 08:39